Qarixii Tiyaatarka ka dib Khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda DKMG Somalia | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Qarixii Tiyaatarka ka dib Khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda DKMG Somalia
Apr 07 2012 – Kadib qaraxii ka dhacay xarunta Tiyaatarka, ayaa waxa soo if-baxaya warar xambaarsan dhiilo colaadeed iyo far-isku-fiiq u dhexeeya madaxda sare ee dowladda KMG.
Su’aalaha la iswaydiiyay ee jawaabta aan loo heyn wali waxaa ka mid ah. Yaa qaabilsanaa amaanka goobta shirka? Yaa u fududeeyay gabadha soo gashay goobta? Ma xiriir wada-shaqayneed ayaa u dhexeeya Al-Shabaab iyo qaar ka mida madaxda dowladda?
Su’aalahaan jawaabahooda qaarkood shirar ayaa loogu fadhiyaa, waxaana la soo sheegayaa inuu shir u socdo Ra’isal Wasaare Gaas iyo madaxda kale ee u dhashay beesha Harti-Daarood.
Madaxdan ayaa sheegay in falkan uu ahaa mid loogu talagalay in lagu qaarajiyo Ra’isal Wasaare Gaas, isla markaana ay fududeeyeen howshan madaxda kasoo jeeda beelaha Hiraab-Hawiye.
Waxay sheegeen in gabadha is-qarxisay ay xalay ku hoyatay guri u dhow xarunta madaxtooyada oo ku yaala agagaarka qabuuraha Shiikh Suufi, gurigaas oo lagu sheegay inay daganaayeen qoys beesha Mudulood kasoo jeeda, waxayna intaas raaciyeen in gabadha laga soo galiyay albaabka gadaale ee Tiyaatarka ee u furan dhanka Shiikh Suufi.
Waxay kaloo shaki ka muujiyeen madaxda Harti-Daarood, baaqashada uu xafladan ka baaqsaday madaxweyne Shiikh Shariif oo aan imaan xafladan.
Dhankooda madaxda beesha Hiraab ayaa iska fogeeyay eedayntaas, waxaana laga soo xigtay saraakiisha sarsare ee booliiska gobolka Banaadir iyo ciidanka Nabad Sugidda, inaysan jirin wax wargalin ah oo ciidankooda loogu sheegay dhicitaanka xafladaas iyo inay sugaan amaanka, waxayna eeda dusha ka saareen cidii qaban qaabisay xafladaas oo aanan diyaarin ciidan nabadgalyo oo baara dadka soo galaya goobta. Tusaale waxay usoo qaateen inaysan jiri ciidan dumar ahaa ee baaray dumarka galayay xaflada.
Waxana la sheegay in wasiiradu ay telefoono isku balansadeen, wasiir walbana uu goobta la yimid ciidankii ilaalada u ahaa, oo marka la isku daro gaarayay dhowr boqol oo ciidan.
Si kastaba ha ahaatee, waxan shaki ku jirin in gabadha soo gashay goobtaan loo fududeeyay, isla markaana ay aheyd gabar ay soo tababareen kooxda Al-Shabaab, waxaana dad badan ay is waydiinayaan in xiriir uu ka dhexeeyo Al-Shabaab iyo hay’adaha u maamula Soomaliya si toos ah iyo si dad-banba, yoolka ay wada higsanayaana uu yahay in Soomaalida laga dhameeyo aqoon-yahanka, culumada iyo waxgaraka. Eedaynta ah in qaraxan loola danlahaa hal qab.
Generaal Maxamed Nuur Galaal oo Khiyaano Qaran ku Tilmaamey Heshiiska Dhexmarey Dowladda Federaalka iyo Shirkadda Hallidayfinch Yaa Iska Leh Mas’uuliyada Qaraxii Tiyaatarka??